7'S Ọkụ | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! 7'S Ọkụ | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Ọ bụghị ihe niile oghere igwe na-ebu dị iche iche bonus agba, chụsasịa na wilds. 7'S Ọkụ bụ otu ndị dị otú ahụ mfe mobile ohere mpere egwuregwu na-anọchi anya classic isiokwu nke ọma.
Scientific Games na-enye ohere mpere nke na-anya isi nke elu technology na-enye obi ụtọ na egwuregwu. The ụlọ ọrụ bụ nke mbụ na onye ike a ala ozugbo lọtrị egwuregwu laa azụ 1974.
Ịkụ nzọ nso awa site a online oghere bụ 25p ka 2 ka atụ ogho. Ọzọkwa, ị nwere oke nke Hi ala spins na ga na-eri 20 ise spins na ụma uru. E nwere nanị atọ esi anwụde na ise ofu mmeri e a online oghere. Ọtụtụ n'ime ndị na akara bụ na abụọ na-agụnye oroma, cherị, wọtamelọn, abụọ Ogwe, kpakpando, hey, plums, lemons. E wezụga ndị a oyiyi, e nwere a 77 akara ngosi na-acha uhie uhie na agba na nwekwara a na-ekpo ọkụ ọkụ 77 icon. Ma nkịtị 77 akara na-ere ọkụ 77 akara eme omume dị ka ndị wilds, n'ọnọdụ ndị ọzọ nile akara. Isi iche n'etiti abụọ bụ payout ha na-enye. Mgbe nkịtị 77 icon ọkọkpọhi gị a 100 ugboro jackpot maka ọdịda ha atọ na a mmeri akara, ọkụ 77 icon enọ ị a 250 ugboro jackpot n'ihi na atọ na a mmeri akara. N'adịghị ka ndị ọzọ online egwuregwu, ebe a na ọ bụ egwuregwu ndị na-ekpebi ma ọ bụrụ na ha chọrọ igwu ọ bụla mmezi feature.
The nhọrọ amara atụmatụ na a online oghere agụnye:
1. Hi ala spins- Ndị a elu kwadoro spins ga-eri gị karịrị ọkọlọtọ nzọ na-enweta na ị ọkara nke ndị nkịtị na-agbata n'ọsọ. Otú ọ dị, e nwere a ukwuu ohere na-elu-emeri ohere dị ise a Hi ala spins nwere ọkụ 77 Akara ngosi n'ọnọdụ niile ọzọ oyiyi.
2. Gamble Njirimara- N'oge a atụ ogho, na egwuregwu nwere ike na-ekpebi na-Gamble nhọrọ. Iji a nhọrọ, nanị see Gamble button mgbe a atụ ogho bụ na ọganihu. Ị na-2x payout ọ bụrụ na ị merie na ọ bụrụ na ị na-emeri, ọ dịghị ihe na-gbanwere.
Nke a online oghere bụ ihe na-adịghị mgbagwoju egwuregwu nke na-enye ohere Player na-oku na-aga ma ọ bụrụ na ha chọrọ ije maka bonus gburugburu ma ọ bụ na. The laghachi player pasent awa site a mobile ohere mpere egwuregwu bụ 95.10%.